Isakhiwo izingoma umculo incike isigqi, kuba le nkomba, sivamile osikweleta ajabule uma ufuna Unqekuzisa ikhanda kuya beat noma ungqongqoze unyawo isithakazelo esinamandla ingoma zakho ozithandayo. Kulokhu, akulula ukuchaza ukuthi yini isigqi umculo, idinga ulwazi ekhethekile, ngisho aphansi umculo imfundo. Nokho, uma ukucela futhi isifiso, kungenzeka ukuchaza le nkinga futhi umphakathi, besebenzisa imibono evamile nge nezincazelo efakwe. Ngo ngokwayo, igama elithi "izinga 'isetshenziswa hhayi kuphela umculo, kuba umqondo omkhulu kangaka wama waqina ukuphila ukuthi uthathwa njengomgcini udaba Yebo.
Kuyini isigqi umculo, kwencazelo
Uma sifuna abanothando iyiphi Ihubo, singaqala ukuzuza ngomunwe wakho noma unyawo kuya beat, njengoba ehlonipha oda ezithile ukuhlaba ikhefu nokuphindaphinda Tempo. Kufana yezwakala, okuyinto elawula nathi cishe ngokungazi. Ngakho, isigqi umculo - kuba inhlanganisela okuyisikhathi imisindo zikhawu kushiwo ngejubane ezithile.
Mhlawumbe kungenxa kwencazelo isigqi kungenziwa njengelinye lamazwe ulimi okunzima kakhulu, ngoba kubalulekile, kunzima ukuchaza umqondo elula.
Indlela ukuchaza elithi "isigqi"?
Kwezemfundo zomculo igama elithi "isigqi" ngisho wachaza, ngoba kakhulu bezibona isigqi amuncwa umzimba kakhudlwana emabangeni aphansi. Pho ukuchaza nomqondo isigqi umuntu ngaphandle imfundo zomculo?
Cishe yonke into ezimpilweni zethu kungaphansi yezwakala elinganisiwe ngesikhathi obuphelele ezithile. Beats inhliziyo ngilokhu cishe alinganayo, amagagasi futhi sibe isikhathi yabo. Rhythm Ingasheshisa, ukubambezela futhi phuma ukululama, kodwa nakanjani lapho, ngakho lo mqondo ezimweni eziningi ibonwa njengoba into yemvelo.
Ngakho-ke, kuphila ngokuvumelana nezinga umculo - inhlanganisela ubude kanye nangezindlela ezihlukahlukene, aluka oyinkimbinkimbi imisindo eziphakeme ezahlukene, ephula ku delineation mode isikhathi. Ngokwengxenye enkulu, iyiphi isigqi umculo kungenziwa sigudluke ibe uhlelo zezibalo ngisho ukudweba igrafu. Nokho, iningi labantu abamdingi ukulungisiswa zezibalo, bethule umuzwa wangaphakathi isigqi.
Indlela ukucacisa isigqi
Isigqi umculo - inhlanganisela usayizi nokukhula. Uma Tempo zonke esicacile "isivinini" umculo, ubukhulu kumelela inani ubude eziyisisekelo imisindo noma uma kancane ukuze komunye umjikelezo iwashi. kanjani ngokuvamile siye sicabange ngezindleko isigqi umculo? Ngokwesibonelo, e-waltz ngokuvamile ukuphindaphindwa "eyodwa ezimbili ezintathu, eyodwa ezimbili ezintathu" - lokhu isigqi waltz, sibalo ngamunye umele iphesenti ukuthi kuyingxenye ebalulekile ngesilinganiso. Ngo ibinzana elingenhla Amabha amabili nje afakwe ngamunye iyizingxenye ezintathu.
Ngo umculo, okuyisibalo ka ngokuvamile libhekisela kumuntu ikota inothi, kodwa kukhona nezinye izinketho. Ngo isibonelo classical usayizi waltz uqobo ngamakwata amathathu, okuyi kwelinye unhlangothi ibekwe ncamashi amathathu ubude alinganayo, okungase kube bazabela ngobugebengu ku ezincane isikhathi umsindo noma benziwe eside. ingoma Wezingane "I Ihlathi Yaphakamisa Christmas Tree" - ungesinye isibonelo esihle ka isigqi obunobunye bushelelezi futhi ubukhulu ngothini ezimbili.
Umthelela embonweni isigqi komculo
Lokho isigqi Kunomthelela endleleni siyaqonda umculo. Ngaphezu kwalokho, izinga ukuguqulwa kungakuthinta kakhulu ukushintsha isiqondiso isitayela, ngezinye izikhathi elisetshenziselwa lokhu amalungiselelo yesitayela. Uma ushintsha okusizwa ukushaya komqondo umculo, ungavula ibe jazz waltz Ukwakheka, lapho ephuma Ihubo liyabonakala umsebenzi. Ukuhlaziya lokho isigqi umculo, singasho umlomo ukuthi lesi esinye sezici sokunquma isitayela uhlobo orientation.
Ngezinye izikhathi ezahlukene fashion babe isigqi ezahlukene, kodwa umculo imfashini cyclical, ngaphezu, akekho ukhansele zabuna. imisebenzi Classical ngokuthi ongafi, ngoba akuyona ngempela umculo ukuguga. Iqhaza isigqi e umculo ayikwazi phansi, omunye ngaphandle komunye nje ayikho.
Kungakhathaliseki kukhona umculo spasmodic?
Ngezinye izikhathi ungase uzwe ukugxekwa umsebenzi: "Lena umculo ngokuphelele spasmodic." Kungakhathaliseki ukuthi le kube? Ake uqale nge yokuthi umculo ngokwawo inhlanganisela imisindo ukuphakama ezahlukene, ivolumu kanye nesikhathi ukuhlaba ikhefu nokuphindaphinda nangezindlela. Uma ubuka eduze amaphuzu oyinkimbinkimbi umculo, ungabona ukuthi isigqi kanye nosayizi ziyahlukahluka kuye imisebenzi enikezwe umqambi.
Kuyini isigqi umculo - kuba njalo ezithile, noma namanje kulungiselelwa nezimo ukuthi kungashintshwa? Yiqiniso, isigqi Ungashintsha, inikeza ukwakheka enkulu ukuphi, isimo ekhethekile. Uma noma yimuphi umculo kubonakala spasmodic ke okungenzeka kakhulu, ihlukaniswe yaba izingxenye ukungalingani kanye isigqi ezahlukene, syncopations luhlotshiswe nangezindlela ekhululekile.
Ubudlelwano lokuhuba nesigci
A sigci osobala umculo ivame ukuhlotshaniswa ukunyakaza nezinsolo, futhi njengoba isibonelo mashi ngokuphelele efanelekayo. Lena ngenye yama-amashuni Rhythmic kakhulu, lapho isabelo ngasinye kusho isinyathelo. Ngokwengxenye enkulu, umculo kanye isigqi umculo inquma isimo futhi uhlobo ukunyakaza ukuthi zivumelane ngokuphelele kuhlanganiswe umsebenzi okukhulunywa ngaye. Dance nomculo baye njalo ubulokhu uhlangene eduze, ngokuvumelana le nhlanganisela amanga ngokunembile isigqi lapho ukunyakaza kuhambisane ukwabelana umculo nangezindlela. Ngokufanayo, umculo ezihambisana nawo izinkondlo ingoma, kufanele babe abangane abathandwa usayizi ofanayo, bese izethameli ngeke babe dissonance.
Rhythm njengendlela mqondo ezibanzi
Njengoba izinqubo eziningi ekuphileni emhlabeni angaphansi a alternation elinganisiwe, singasho ngokuphepha ukuthi inkulumo ethi "isigqi wokuphila" akuyona singathekiso. Rhythm kwenza ukuphila kube lula, singena uhlobo resonance nemijikelezo okuphindaphindiwe, ngokumitha kwemihlambi ngaphakamisa nge ukuthuthukiswa. Ngakho-ke, ukuphila Rhythmic Angabi umjikelezo omubi. Kuyinto, kunalokho, Kuvunguza phezulu, efanekisela intuthuko yomuntu futhi kufana kakhulu sigci zomculo. Umculo lungatholwa izinqubo ezifanayo - ukuthuthukiswa, umvuthwandaba nesiphetho.
Inkulumo ethi "ungenele isigqi ukusebenza" futhi angabacwasi okwandile kuhilela I alternation ngokuhleleka komsebenzi kanye nokuphumula. Ukufana usukela esobala ngokuphelele, ngakho-ke lokhu umqondo ngempela kumelwe libhekwe njengelingcwele ebanzi okungaphezu nje aphathe ihlandla zomculo.
futhi kudingeka ukuba uxhume isigqi, nje kudingeka ukhethe ukuthi iliphi Ngaphezu ofanele ukungena resonance imvelo sokuzindla yimpumelelo. Abanye abantu bakhetha isigqi amagagasi, elinye - emshaya kwenhliziyo yomuntu. Isigqi ngokwayo kubaluleke kakhulu ukuze kuzuzwe ukuvumelana, umculo kusiza ukuze kufinyelelwe lo mgomo.
Hlangana soloist ka "Infinity" - Tatiana Bondarenko
Soloist we "Scorpions" Klaus Meine: Biography, amaqiniso athakazelisayo
Okufanele ukwazi ukuthi ekwelapheni pancreatitis ezingamahlalakhona kuphumelele